Ny angano fanoratana | Martech Zone
Ny angano fanoratana
Alatsinainy 15 Febroary 2016 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo sary miady hevitra resahiko amin'ny saika isaky ny resaka ataoko amin'ny orinasa dia ilay antsoiko hoe angano fanamarihana. Amin'ny rafitry ny fandrefesana rehetra dia aleontsika mifehy ny fitsipi-pitondrantena sy tsy fitoviana. Raha izany dia izany. Olana anefa na izany aza satria tsy izany no andraisana fanapahan-kevitra momba ny fividianana. Tsy maninona na mpanjifa ianao na raha orinasa ianao - tsy ny tena zava-misy fotsiny Mpanjanantany.
Case in point dia ny fividianako an Amazon Echo. Nahita ny buzz an-tserasera aho tamin'ny fotoana nanombohany voalohany, saingy tena tsy nilaiko izany. Tamin'izany fotoana izany, izaho koa dia tsy mpampiasa voalohany. Saingy rehefa nifindra bebe kokoa tamin'ny fividianana orinasanay tany Amazon aho, niditra tao amin'ny Prime, ary nahazo fandefasana tao anatin'ny iray andro, dia niova ny fiheverako an'i Amazon.
Mbola tsy nahalala firy momba ny Amazon Echo, na izany aza. Indray andro tao amin'ny Facebook, Mark Schaefer nanao hevitra mahaliana. Nolazainy fa miresaka amin'ny Amazon Echo-ny izy tahaka ny olona ao amin'ny efitrano. Amin'ny maha-geek teknolojia sy mpankafy an'i Amazon ahy, dia nahaliana ahy izany.
Amin'ny lafiny ara-teknika, hoy aho hoe io no tena fikitika voalohany tamin'ny dia nataoko. Nifindra avy tao amin'ny Facebook aho nankany Amazon izay namakiako ny pejin'ny vokatra. Nahafinaritra be ilay izy nefa tsy azoko tsara ny nanamarina ny fandaniana tamin'io fotoana io. Nifindra tany amin'ny Youtube aho avy eo mba hijery ireo karazana zavatra mahafinaritra ataon'ny olona any ivelan'ny fitaovana marketing.
Niverina tany Amazon aho ary namaky ireo tsikera kintana 1 ary tsy dia nahita zavatra mandrara ahy tsy hividy ilay fitaovana… ivelany na ny vidiny. Tsy afaka nanamarina ilay kilalao vaovao aho tamin'izany.
Ho an'ny herinandro manaraka na eo am-pitetezana ny tranonkala, dokambarotra famerenam-barotra sasany momba ny Amazon Echo nipoitra. Nanaiky ny iray amin'ireo doka aho tamin'ny farany ary nividy ilay fitaovana. Manoratra andalana vitsivitsy momba ny fitiavako azy aho, saingy tsy izany no tanjon'ity lahatsoratra ity.
Ny tanjon'ity lahatsoratra ity dia ny hiresaka momba ny fivarotana an'ity Echo Amazon ity. Raha mikasika voalohany io dia homena an'i Mark ho influencer… na dia tsy influencer ho an'ny fitaovana sy ny haitao aza izy. Holazaiko fa ny fanehoan-kevitr'i Mark momba ny Echo dia hetsika fampahafantarana bebe kokoa tamin'ny dian'ny mpanjifako. Na aiza na aiza alohan'ny fanehoan-kevitr'i Marka dia fantatro ny fahaizan'ny Echo sy ny endri-javatra isan-karazany.
Raha ny maodelim-panondroana dia mikasika farany, ny dokam-barotra sy ny marketing indray no ho loharanon'ny varotra. Saingy tsy izy ireo. Raha manontany ahy ianao hoe inona ny paikady ara-barotra naharesy lahatra ahy hividy ny Echo, valiako hoe:
Tsy nisy izany paikady tokana izay no nahatonga ahy nividy ny Echo, izy rehetra ireo. Ny hevitr'i Marka, ny fikarohako ny horonantsary novokarin'ny mpampiasa, ny fijeriko ireo fanadihadihana ratsy, ary ny doka fanaovana dokam-barotra. Ahoana no ampidirina ao amin'ny fantsom-pivadihan'ny Google Analytic? Tsy… toa ny ankamaroan'ny dian'ny mpanjifa.
Nanoratra momba izany aho fitarainana lehiben'ny marketing ao anatiny ary ny fanalahidy no lakile.
Misy safidy hafa nefa sarotra be io. vinavina Analytics afaka mandinika ny fitondran-tena amin'ny varotra amin'ny salantsalany sy ny paikady rehetra ary rehefa manamboatra ianao dia afaka manomboka mifamatotra amin'ny hetsika mifandraika amin'ny varotra ankapobeny. Ireo motera ireo dia afaka maminavina ny fomba hampihenana na hampiakarana ny teti-bola na ny hetsika amin'ny paikady marketing iray hisy fiantraikany amin'ny farany ambany.
Rehefa mijery ny ezaka ataonao amin'ny varotra ianao, dia tsy maintsy ataonao fa na ny marketing tsy misy fiovam-po mivantana aza dia misy akony amin'ny fizotry ny fanapahan-kevitry ny mpanjifa. Ary ny vokany dia mihoatra lavitra ny ezaka ataontsika amin'ny varotra - ny traikefa iray manontolo amin'ny fanantenana dia mandray anjara amin'ny dia.
Ity misy ohatra tsotra: manana magazay ianao ary manapaka ny mpiasa manadio anao. Tsy hoe maloto ny magazanao, fa angamba tsy misy pentina toy ny teo aloha intsony. Ny valiny dia ny varotrao dia milatsaka be dia be ny mpiantsena finicky dia tsy mahatsiaro tena ho madio toy ny fivarotana manodidina. Ahoana ny fahitanao izany amin'ny ezaka ataonao amin'ny varotra? Mety efa nampitombo ny vidin'ny varotrao aza ianao amin'izao fotoana izao fa ny varotra rehetra kosa nanda. Tsy misy laharana andalana “tena madio” ao amin'ny tetibolan'ny varotrao… saingy fantatrao fa misy fiatraikany.
Androany dia mila votoatin'ny atiny ny orinasa. Manomboka amin'ny tranokala madio sy mamaly, hatramin'ny lahatsoratra mitohy izay manangana ny fitokisan'izy ireo, mampiasa tranga, taratasy fotsy ary infografika. Nozaraina avokoa izy rehetra ary ampiana sanda amin'ny alàlan'ny fantsona sosialy. Ireo rehetra ireo dia nohamarinina ho an'ny motera fikarohana. Ireo rehetra ireo dia mandray anjara amin'ny mailaka mailaka izay mamelona ny fanantenana.
Kritika daholo izany - tsy misy iray ifanakalozana varotra ho an'ny iray hafa. Azonao atao ny mandanjalanja azy ireo araka ny tokony ho izy rehefa mahita ny fiatraikany, saingy tsy misy na inona na inona tsy maintsy atao amin'ny fisian'ny marketing amin'ny Internet tanteraka.
Tags: amazon echoAttributionfanomezam-pahefana voalohanymampihiditra barotrafanomezam-pahefana farany mikasikaanganoangano fanamarihanavinavina Analyticsfanamelohana mialoha